Shiinaha OTR Rim qaybaha Shiinaha OEM soo saaraha 25 ″ qaybaha warshad iyo soosaarayaasha | Hygg
OTR Rim qaybaha Shiinaha OEM soo saaraha 25 ″ qaybood
Qalabka Rim waa giraan qufulka, giraanta dhinaca, kursiga kuusha, fure darawalka iyo flange dhinac ah oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee khafiifka sida 3-PC, 5-PC & 7-PC OTR rim, 2-PC, 3-PC & 4-PC rimuhu forklift. Ku 25 ″ waa cabirka guud ee qaybaha qar maxaa yeelay gawaarida gawaarida badan, kuwa dhaamiya iyo qashin qubka ayaa isticmaalaya 25 ″ gees. Qalabka Rim waxay muhiim u yihiin tayada darafta iyo kartida. Giraanta qufulku waxay u baahan tahay inay lahaato dabacsanaan sax ah si loo hubiyo inay qafiska qarka u saarantahay isla markaasna ay fududahay in la dhimo oo kor loo qaado. Kursiga kuusha ayaa muhiim u ah awoodda qarka, wuxuu xambaaraa culeyska weyn ee qarka. Wareegyada dhinacyadu waa qaybaha ku xidha taayirka, waxay u baahan tahay inay ahaato mid xoog badan oo sax ah oo ilaaliya taayirka.
Waa maxay qaybaha khafiifka ah?
Qalabka Rim waa giraan qufulka, giraanta dhinaca, kursiga kuusha, fure darawalka iyo flange dhinac ah oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee khafiifka sida 3-PC, 5-PC & 7-PC OTR rim, 2-PC, 3-PC & 4-PC rimuhu forklift. Ku qaybaha qar leeyihiin tiro ballaaran oo cabbirro ah, waxay ka bilaabmaysaa cabbirka 8 "illaa iyo 63". Qalabka Rim waxay muhiim u yihiin tayada darafta iyo kartida. Giraanta qufulku waxay u baahan tahay inay lahaato dabacsanaan sax ah si loo hubiyo inay qufulayso qarka isla waqtigaasna ay fududahay in kor loo qaado iyo hoos loo dhigo. Kursiga kuusha ayaa muhiim u ah awoodda qarka, wuxuu xambaaraa culeyska weyn ee qarka. Giraanta dhinaceedu waa qaybta ku xidha taayirka, waxay u baahan tahay inay ahaato mid xoog badan oo sax ah si loo ilaaliyo taayirka.
Immisa nooc oo walxo qar ah?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah qaybaha qar, dalab kala duwan waxaan leenahay heerka naqshadeynta qaybaha qariyo qaybaha darafta culus. Lagu qeexay naqshadeynta,qaybaha qar waxaa loo kala saari karaa sida hoos ku qoran.
Qalabka dhismaha qalabka qarkiisa
- T-taxane, taxane EM.
Qaybaha qodista macdanta
- EM / EV taxane
- Qufulka qufulka, giraanta dhinaca, kursiga kuusha 3-PC iyo 4-PC fiiqyada forklift.
Waa maxay qaybaha cirifka loo isticmaalo?
Kuweena hareerayaasha rim waxaa loo isticmaali karaa inta badan qararka OTR sida:
(1) Dalxiisyada qalabka dhismaha
(2) Wareegyada Forklift
(3) Wareegyada macdanta
Tusaalooyinka Tusaalaha ah ee aan bixinno
Magaca qaybaha Rim Cabir
Giraanta qufulka 25 "
QALABKA WADAABKA GUDDIGA Dhammaan cabbirka
Flange Side 25 ", 1.5"
Giraanta Side 25 ", 2.0"
Kursiga kuusha 25 ", 2.0", Darawal yar
25 ", 2.0" Darawal weyn
25 "x 4.00" (La ogaaday)
Faa'iidooyinkayada qaybaha qarkiisa?
Asal ahaan shirkad yar oo soo saarta birta, HYWG waxay bilaabeen inay soo saaraan qaybaha qar ilaa dhamaadkii 1990, 2010 HYWG wuxuu noqday hogaamiyaha suuqa ee gawaarida xamuulka qaybaha qar iyo OTR qaybaha qar, saamiga suuqa ayaa gaadhay 70% iyo 90% Shiinaha; OTRqaybaha qar waxaa loo dhoofiyey soosaarayaasha qarkiisa adduunka sida Titan iyo GKN. Maanta HYWG waa tan kaliyaqaybaha qar soo saaraha soo saari kara gaari xamuul ah, OTR iyo forklift qaybaha qar, waxaan nahay hogaamiyaha aduunka ee qaybaha qar suuqa.
Hore: Cirifka warshadaha ee shirkadda Boom wiishka waxsoosaarka Shiinaha
Weelka wiishka wiishka lagu gaadho qarqarka wax lagu xidho oo madhan ...
Macdanta qarisay Shiinaha OEM size soo saaraha ka 33 & ...
Dahaarka Warshadaha ee loogu talagalay Boom wiishka shirkadda ilaaliyaha Shiinaha ...
Qaybaha OTR Rim ee cabirkoodu ka duwan yahay 8 ...
Qalabka dhismaha OTR qar loogu talagalay Grader Shiinaha ...